‘विकासमा दिगोपना र गुणस्तरियता चाहिन्छ’ – Sadarline
हरि प्याकुरेले बाँकेको स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा आएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा जिल्लाको विकास निर्माणको काममा सुधारका प्रयास सुरु थालेका छन् । पहाडी जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दैलेखमा स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा काम गरिसकेका प्याकुरेल बांँके जस्तो जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी भएको पहिलो पटक हो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा रही लामो समय कार्यसम्पादन गरि सकेका प्याकुरेलका लागि बांँके अपरिचित जिल्ला होइन । जिल्लामा आए लगत्तै उनले विकास निर्माणका प्राथमिक योजनाहरु निर्धारण गरि काम सुरु गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँंग सदरलाइनडटकमका लागि कमल डाँगीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
१.स्थानीय विकास अधिकारी भएर भर्खर बा“के आउनु भएको छ । तपाईका प्राथमिक योजनाहरु के–के छन् ?
–दैलेखबाट सरुवा भई बाँके आएको दुई महिना जति भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा समेत पहिला काम गरेर बसेको जिल्ला भएका कारण यहा अबस्थाका बारेमा बुझ्न मलाई सहज छ । स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गर्नुपर्ने नियमित कामहरुलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । विकास निर्माणका कामहरु गुणस्तरिय, प्रभावकारी, छिटो छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । जिल्लामा खुल्ला दिशामुक्त अभियान, पूर्ण खोपयुक्त, साक्षरता जस्ता अभियानहरु सन्चालनमा छन्, त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर समयसिमा भित्र काम सक्ने योजना बनाएको छु । गाविसदेखि जिविससम्मका कामकाजहरु प्रभावकारी बनाउने र सेवाग्राहीहरुलाई सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिलाउनका लागी नयां योजनाहरु कार्यान्वयन गराउने सोचेको छु । हरि प्याकुरेल स्थानीय विकास अधिकारी, बाँके
२. विकास निर्माणका कामहरु कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?
– विकास निर्माणका कामहरुमा दिगोपना र गुणस्तरियता हुनैपर्छ । यसमा कसैले पनि सम्झौता गर्न मिल्दैन । मैले प्राविधिकहरुसंग बसेर स्पष्टरुपमा निर्देशन दिइसकेको छु की विकास निर्माणका कामहरु दिगोपना र गुणस्तरिय हुनैपर्छ । त्यस तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छु । साथै उपभोक्ताहरुलाई पनि यसमा जगारुक भई काम गर्न र दबाब दिन पनि आग्रह गरेको छु ।
३. गाविसदेखि जिविससम्मका कामहरु प्रभावकारी नहुने गरेको गुनासो सुनिन्छ , त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
– सेवाग्राहीहरुलाई भनेका बेला र आबश्यक परेकाा बेला छिटोछरितो गरी सेवा दिनैपर्छ । त्यो हाम्रो दायित्व हो । त्यसबाट भाग्न खोज्ने कर्मचारी माथि कारवाही हुन्छ । गाविस सचिवहरुलाई मर्का पर्ने गरी यताउती नजान निर्देशन दिइसकेको छु । काम छाडेर जिल्ला विकास समिति धाउने, गाउ“ भन्दा शहर बढि धाउने, अर्को जिम्मेवार ब्यक्ति नतोकी जथाभावी हिड्ने सचिवहरुको कार्यालाई निगरानी बढाइनेछ । अत्याबश्यक अबस्था बाहेक अन्नय अबस्थामा जिल्ला विकास समितिमा नआउन, शहर धेरै नधाउन आग्रह गरेको छु । कहि जानुपर्ने भयो भने पनि दोस्रो जिम्मेवार ब्यक्तिको नाम, सम्पर्क नम्बर गाविस कार्यालयमा टास्न निर्देशन दिएका छौं । यस्तै तरिका हामीले जिल्ला विकास समितिमा पनि अपनाउछौं ।
४. कामहरु समयमै नसकिने समस्या छ नी ?
– तर यसपाली समयमै काम सक्नुपर्छ । मैले अहिल्यैबाट सम्बन्धित ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, प्राविधिकहरुलाई निर्देशन दिइ सकेको छु । नियमनुसार काम हुनुप¥यो र समयमै काम सक्नुप¥यो । त्यसो भएन भने कारवाही गर्छु । जेष्ठ १५ भित्र काम सक्नैपर्ने छ ।
५. बाँके जिल्लामा खोलाबाट अबैध खनन हुने गरेको पाइएको छ । त्यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ ।
– बैधानिकरुपमा जिविसबाट ढुङ्गा, गिट्ी उत्खननका लागी ठेक्का पाएका ठाउहरुमा स्काभेटर प्रयोग गरेको पाइएको छ । खोलाहरुमा स्काभेटर प्रयोग गर्न पाईदैन । त्यस्तो पाइउपछि हामीले प्रहरीको सहयोगमा केही स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएका छौं । प्राकृतिक स्रोत, साधनको निकासीमा यस्ता लापरवाहीहरु देखिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । प्रहरी, वन कार्यालयको समन्वयमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।
६. बिगतमा समयमै परिषदहरु सम्पन्न हुन नसकेको अबस्था छ । यसपाली सुधार होला ?
– यसपाली सुधार हुन्छ र हुनैपर्छ । १४ चरण पार गरेर विकास योजनाहरु छनौट हुन्छ । ती सबै प्रकृयाहरु समयमै पुरा गर्नुहुन्छ । हामीले गाउं परिषद पुस समान्तसम्म र फागुणमा जिल्ला परिषद गर्ने भनेका छौं । सबै कामहरु तोकिएकै काममा हुन्छ । विकास निर्माणका योजनाहरु छनौट गर्दा बढि भन्दा बढि नागरिकहरुको सहभागिता होस् भन्ने उदेशयले छलफल समेत चलाएका छौं ।
रुद्र सुवेदी/सदरलाइन ३ माघ, नेपालगन्ज : आफुमाथि हुने घरेलुहिंसा तथा सामाजिक हिंसाको विरुद्ध सामुहिक आवाज उठाउने उद्देश्यले बाँकेको राप्तीपारी बिनौना गाविसका बैदेशिक रोजगार पीडित तथा प्रभावित महिलाहरु संगठित भएका छन् । अभियान नेपालको सहजिकरण तथा सहयोगमा उनीहरु संगठित भएका हुन । घरको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि घरसल्लाहले नै बैदेशिक […]
२६ श्रावण २०७३, बुधबार ०२:४१
२१ असार २०७४, बुधबार २०:१९
खजुरा गाउपालिकामा एमालेको विजय जुलुस
१३ बैशाख २०७८, सोमबार १७:०५
प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री अधिकारीको स्मृति दिवस
मन्त्री बरालद्वारा बाँकेका अस्पताल, क्वारेन्टाईनकाे अनुगमन
१० आश्विन २०७८, आईतवार १५:३९
ट्रयाक्टरको ठक्करबाट कोहलपुरमा एकको मृत्यु